May | 2009 | Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 29/05/2009 ⋅ 1 Comment
မနေ့က ပေါ်လစီ think tank တခုက ဒါရိုက်တာတယောက်နဲ့ စကားပြောရင်း လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ လေဘာနိုင်မလား။ ကွန်ဆားဗတစ် နိုင်မလားမေးကြည့်တော့ သူက ကွန်ဆား ဗတစ် နိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြတ်ပြတ်သားသားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေက လေဘာကို မုန်းလို့ protest vote လုပ်ကြလို့သာ နိုင်မှာတဲ့။ သူကဆက်ပြီးတော့ လူတွေက ၀န်ကြီးချုပ်ဂေါ်ဒန်ဘရောင်းကို ပါလီမန်အမတ်တွေရဲ့ အသုံးစရိတ် အရှုပ်တော်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့သာ အမှတ်ရကြလိမ့်မယ်။ သူကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာကို သတိရကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါသေးတယ်။
Posted by zizawa ⋅ 27/05/2009 ⋅ 1 Comment
Story ofawoman who has lost two of her children during cyclone Nargis in May 2008. She now lives inasmall village in Pyinsalu. They still need our help to rebuild their lives. To donate or for more information, please email zizawa at zizawa01@gmail.com
Scenes of Rangoon-2
Posted by zizawa ⋅ 24/05/2009 ⋅ Leaveacomment
ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံဟောင်းနေရာ။ စိန်ပန်းနီတွေသာ စကားပြောတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့နောက်က ကျောင်းသားတွေရဲ့ ရယ်သံ၊ ကြွေးကြော်သံ၊ စကားရည်လုပွဲကအသံ၊ တို့ဗမာသီချင်းဆိုသံ၊ အာဏာရှင်တွေကို စိန်ခေါ်တဲ့အသံတွေကို လွမ်းတယ်လို့ ပြောလေမလား………..
scenes of Rangoon-1
Posted by zizawa ⋅ 22/05/2009 ⋅ Leaveacomment
စံပယ်နဲ့စိန်တွဲရင် လာဘ်ကောင်းသတဲ့။ ဒါကတော့ စိန်ပန်းရွက်တွေနဲ့ စံပယ်တွေတွဲပြီး ရောင်းနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် လာဘ်မကောင်းနိုင်ရှာသေးတဲ့ ဒီစံပယ်ပန်းရောင်းတဲ့လူရဲ့ဘ၀ကိုရော ဘာအဆောင်တွေ ပေးရပါ့။
Posted by zizawa ⋅ 21/05/2009 ⋅ Leaveacomment
ခရီးက ပြန်ရောက်ပါပြီ။ မြင်ခဲ့၊ ကြားခဲ့၊ လိမ်ခံခဲ့ရတာတွေ တဖြည်းဖြည်းရေးပါ့မယ်။